"Jiro sy loko any Venise", làlana an-tserasera maimaimpoana ao amin'ny Thyssen Museum | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Inspiration, Tutorials
Mandritra ny andro fiasan'ny quarantine ho an'ny coronavirus dia tsy misy tsara kokoa noho ny mahazo a fitsaboana an-tserasera avy ao amin'ny Thyssen Museum. Ity fampianarana ity dia «Fahazavana sy loko amin'ny hosodoko. Ny angano an'i Venise ».
Saika tsy misy teny ho an'ny làlana miavaka izay tarihina na ho an'ny mpahay tantara na ho an'ny besinimaro. Fianarana iray izay miompana amin'ny maha-zava-dehibe ny loko ho antony iray manaparitaka ny zava-kanton'ny mpanao hosodoko tandrefana.
El Thyssen Museum dia naka ny angano an'i Venise mba hanehoana ny fahaizan'ny loko mamoaka ny jiro amin'ny seho sy ny fomba fandinihana mety kokoa mihoatra ny ilaina mba hisamborana ny jiro amin'ny asa sary.
Mametraka ny lantom-peo amin'ny Venice alohan'i Roma, izy no faharoa ny maherifo amin'ny sary hosodoko, raha ny teo aloha kosa dia nanadio ny firavoravoana tamim-pahamendrehana sy mahafinaritra.
Ny Mazava ho azy «Jiro sy loko amin'ny sary hosodoko. Ny angano an'i Venise ”, dia azo avy amin'ny Fandraisana an-tsary 9 an'ny Espaniola izay azonao idirana avy amin'ity rohy ity na milalao ny horonan-tsary voalohany tafiditra ao amin'ity publication ity. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ilay fantsona ary manaraka ny sisa amin'ny videoconferansa izay loharanon'ny fahendrena sary ary hampiseho aminao ny fomba nianarana ireo loko sy hazavana ireo tompondakan'ny sary hosodoko.
Ny Mazava ho azy «Jiro sy loko amin'ny sary hosodoko. Ny angano an'i Venise » - Web
Horonan-tsary 9 izay azo zahana amin'ny baiko rehetra tadiavinao ary izany dia manana faharetan'ny 1 ka hatramin'ny 2 ora arakaraka ny videoconferensi. Fahafahana lehibe amin'izao andron'ny quarantine izao hanokana fotoana hianarana ny kilasika sy ny onjan'ny Venice amin'ny fampiasana loko. Ary raha te hametraka fitsapana ny fahalalanao momba ny loko ianao dia mandehana amin'ity fitsapana Kandinsky ity ary tena mahaliana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny Thyssen Museum dia manome làlana an-tserasera maimaimpoana: «Jiro sy loko amin'ny hosodoko. Ny angano an'i Venise »